အကောင်းဆုံး 12Mm, ဌာနမှူး Boring ခေါင်းဆောင်များ Boring, ဌာနမှူး Tool ကို Holder Boring, ရောင်းမည်ဌာနမှူး CNC စက် Boring
Home > ထုတ်ကုန်များ > ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များစနစ်ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ
ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဦးခေါင်း Boring 12Mm, ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Boring ဌာနမှူး Tool ကို Holder R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
F1 ကိုအမျိုးအစား Mills Rough R8 Shanks ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူး
RBH25 INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက်
CBA Micro နဲ့ Finish ကိုဘှားမွငျခေါင်းဆောင်များပျင်းစရာ tools တွေကို cylinder
စက် tool ကို boring F1 ကို3"ဆလင်ဒါပျင်းစရာ tools များ
တိကျ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ F1 ကို 18mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ
ဌာနမှူးဆလင်ဒါပျင်းစရာခေါင်းကို Boring F1 ကို2"
RBH32 INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက်
CBA Micro နဲ့ Finish ကိုဘှားမွငျခေါင်းဆောင်များ
RBH INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက်
RBH INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူးကိုက်
RBH 40-55LA-C အညွှန်းကိန်း-နိုင်ခဲ့အမွှာ-bit မှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ
ဘက်ပေါင်းစုံမြင့်တိကျစွာ Finish ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး
ဘက်ပေါင်းစုံမြင့်တိကျစွာ 52-75 Finish ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး
RBH ညွှန်းကိန်း-နိုင်ခဲ့အမွှာ-bit မှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ
RBH ညွှန်းကိန်း-နိုင်ခဲ့အမွှာ-bit မှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏-ခေါင်းဆောင်များ
Hesds Boring high Precision CBA Micro နဲ့ Finish ကို
ဘက်ပေါင်းစုံမြင့်တိကျစွာ Finish ကိုဘှားမွငျ Tool ကို
ခေါင်းဆောင်များ Boring F1 ကို Rough F1-2 '' / F1-3 '' / F1-4 ''
မိုက်ခရို finish ကိုငြီးငွေ့စရာအကြီးအကဲများ cba CNC ကြိတ်အစိတ်အပိုင်းများ
F1 ကိုအမျိုးအစား Mills Rough R8 Shanks ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူး ပျင်းစရာဌာနမှူး Shanks * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool ကိုခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး Boring အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
RBH25 INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက် * အပြည့်အဝ Size ကို RBH ကြမ်းတမ်းပျင်းစရာခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ T က ool ခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး...
CBA Micro နဲ့ Finish ကိုဘှားမွငျခေါင်းဆောင်များပျင်းစရာ tools တွေကို cylinder အဆိုပါ borer အထူးဝယ်ယူရမည်။ ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်, ထို Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် ER Collet, BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks, BT40 Collet Chuck, Rough...
စက် tool ကို boring F1 ကို3"ဆလင်ဒါပျင်းစရာ tools များ * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool ကိုခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး Boring အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
high-quality F1 ကို Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ တိကျ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ F1 ကို 18mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool...
2 "ကိုဘှားမွငျဌာနမှူးဆလင်ဒါပျင်းစရာစက်ပျင်းစရာကြိတ် ပျင်းစရာဌာနမှူး Shanks * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool ကိုခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး Boring အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
ဌာနမှူးဆလင်ဒါပျင်းစရာခေါင်းကို Boring F1 ကို2" ပျင်းစရာဌာနမှူး Shanks * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool ကိုခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး Boring အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool...
RBH ညွှန်းကိန်း-နိုင်ခဲ့အမွှာ-bit မှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ * အပြည့်အဝ Size ကို RBH ကြမ်းတမ်းပျင်းစရာခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ T က ool ခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး...
CBA Micro နဲ့ Finish ကိုဘှားမွငျခေါင်းဆောင်များ အဆိုပါ borer အထူးဝယ်ယူရမည်။ ကျနော်တို့ TELI Tool ကိုစက်ရုံအဓိကအားဖြင့်, ထို Edge Finder ကို inclduing, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများစီးရီးထုတ်လုပ် ER Collet, BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks, BT40 Collet Chuck, Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူး, GT24 ဒါအပေါ်...
RBH INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက် * အပြည့်အဝ Size ကို RBH ကြမ်းတမ်းပျင်းစရာခေါင်းကို အချိန်ပေါ် *...
RBH INDEX အမွှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များကိုက် * အပြည့်အဝ Size ကို RBH ကြမ်းတမ်းပျင်းစရာခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ T က ool ခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး...
RBH 40-55LA-C အညွှန်းကိန်း-နိုင်ခဲ့အမွှာ-bit မှာ Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ * အပြည့်အဝ Size ကို RBH ကြမ်းတမ်းပျင်းစရာခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ T က ool ခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး...
Supply နိုင်ခြင်း: 1000PCS/MONTH
ဘက်ပေါင်းစုံမြင့်တိကျစွာ Finish ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်း, carbide boring ဘားအစုံနှင့် Arbore ခေါင်းကို adapter သီးခြားစီရောင်းချကြသည်။ အဆိုပါ Boring ဌာနမှူးသတ်မှတ်မည် မှလွဲ. ငါတို့သည်လည်းအခြားအစက်ထိုကဲ့သို့သော Tool ကိုစာတိုက်နှင့် Holder အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, Collection, Chuck, Chuck, Mills Arbore,...
Hesds Boring high Precision CBA Micro နဲ့ Finish ကို * အပြည့်အဝ Size: boring ခေါင်းကို LBK1 LBK2 LBK3 LBK4 shanks * ပျင်းစရာဌာနမှူး အချိန်ပေါ်ဖြန့်ဝေ * BT40-LBK3-95 * ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု၏ 14...
ဘက်ပေါင်းစုံမြင့်တိကျစွာ Finish ကိုဘှားမွငျ Tool ကို - ထို Shanks အမျိုးအစားများ: BT Shanks, R8 Shanks, MT Shanks နှင့် ISO Shanks ။ ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်း, carbide boring ဘားအစုံနှင့် Arbore ခေါင်းကို adapter သီးခြားစီရောင်းချကြသည်။ အဆိုပါ Boring ဌာနမှူးသတ်မှတ်မည် မှလွဲ. ငါတို့သည်လည်းအခြားအစက်ထိုကဲ့သို့သော Tool...
ခေါင်းဆောင်များ Boring F1 ကို Rough F1-2 '' / F1-3 '' / F1-4 '' ပျင်းစရာဌာနမှူး Shanks * အပြည့်အဝ Size ကို F1-12mm Rough ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို အချိန်ပေါ် * BT40 ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းကို Shanks Delivery * ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ Tool ကိုခုနှစ်တွင်ဌာနမှူး Boring အဓိကအားဖြင့်...
မိုက်ခရို finish ကိုငြီးငွေ့စရာအကြီးအကဲများ cba CNC ကြိတ်အစိတ်အပိုင်းများ အဆိုပါ CBA ချိန်ညှိအသေးစား boring အကြီးအကဲများ Shanks ဟာ BT NT MT နှင့် R8 မော်ဒယ်ရှိသည်, စံသတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးအင်္ဂလိပ်စံသို့မဟုတ်သင်ရှာတွေ့နေကြတယ်ဆိုတာကိုအတွက်ရောထွေးနေကြသည်မက်ထရစ် standard.if ဖြစ်ပါသည်,...
တရုတ်နိုင်ငံ ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ ပေးသွင်း
ဦးခေါင်းသတ်မှတ်မည် Boring မြင့်မားသောတိကျရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်မည်ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး၏ 1pc, ဌာနမှူး Shanks Boring ၏ 1pc နှင့် carbide တင်ရန်ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဘား၏ 9pcs ၏ 1set ပါဝင်သည်။
--The DIA ။ 2, 3,4(လက်မ): အဆိုပါယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူးများ
- ထို Shanks အမျိုးအစားများ: R8 Shanks, MT Shanks နှင့် ISO Shanks ။
--Boring ဘားသတ်မှတ်မည်: 9pcs / 1/2, 3/4 နဲ့ 1 လက်မခန့်ထား၏။
ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်း, carbide boring ဘားအစုံနှင့် Arbore ခေါင်းကို adapter သီးခြားစီရောင်းချကြသည်။
အဆိုပါ Boring ဌာနမှူးသတ်မှတ်မည် မှလွဲ. ငါတို့သည်လည်းအခြားအစက်ထိုကဲ့သို့သော Tool ကိုစာတိုက်နှင့် Holder အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, Collection, Chuck, Chuck, Mills Arbore, အင်္ကျီလက်, ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို, အလုပ်လုပ်ဇယား, စသည်တို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းထောက်ပံ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်များအတွက်, ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ cataolg browse နှင့် download လုပ်ရန်ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ သင်တို့သည်လည်းတိုက်ရိုက်နောက်ထပ်အကူအညီများရရှိရန်အီးမေးလ်, ဖက်စ်နှင့်ဖုန်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဦးခေါင်း Boring 12Mm
Boring ဌာနမှူး Tool ကို Holder
Boring ဌာနမှူး CNC စက်
ဦးခေါင်း Boring 2084